နေအိမ် / Archives for Arbitrator
22/01/2017 အားဖြင့် IAA ကွန်ယက်
ခုံသမာဓိလွတ်လပ်ရေးအမြဲအရေးကြီးသည်, ဒါပေမယ့်မလေးရှားတရားရုံးလွတ်လပ်ရေး၏မှားယွင်းသောထုတ်ပြန်ချက်အောင်များအတွက်အကျဉ်းထောင်တစ်ခုခုံသမာဓိရုံး convicting အတွက်ခါတိုင်းထက်နောက်ထပ်သွားပြီ. တစ်ဦးကဗြိတိန်ခုံသမာဓိရုံးလွတ်လပ်ရေး၏မိစ္ဆာကြေငြာရာတွင်ထောင်ဒဏ်ခြောက်လချမှတ်ခံခဲ့ရ, ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအနုညာတစီရင် Review ကဖော်ပြခဲ့သည်အဖြစ်. မလေးရှားအရ […]
အောက်မှာ Filed: အနုညာတစီရင်စည်းကမ်းများ, ခုံသမဓိ, အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအနုညာတစီရင်သုတေသန, မလေးရှားအနုညာတစီရင်
05/11/2016 အားဖြင့် IAA ကွန်ယက်
အကျိုးစီးပွားအလားအလာပဋိပက္ခများကိုထုတ်ဖော်ရန်အဆိုပါခုံသမာဓိရုံးရဲ့တာဝန်ဟာသက်ဆိုင်ရာဥပဒေပေါ်တွင်မူတည်သည်. အဆိုပါခုံသမာဓိရုံး, ပြင်သစ်မှာ, နှစ်ခုအဆင့်ဆင့်ပေါ်တွင်တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်သောပါတီများကိုဦးတည်ရိုးသားမှုတစ်ခုတာဝန်အားဖြင့်ချည်နှောင်လျက်ရှိပါသည်, တစ်ဦးအချိန်နဲ့တပြေးညီထုံးစံ၌. ပဌမ, သူကသူသို့မဟုတ်သူမ၏လက်ခံအလုံးစုံတို့ကိုရှေ့တော်၌နှင့်အကျိုးစီးပွားမဆိုအလားအလာပဋိပက္ခထုတ်ဖေါ်ရမယ် […]
အောက်မှာ Filed: အနုညာတစီရင်သတင်းအချက်အလက်, ခုံသမဓိ, ပြင်သစ်အနုညာတစီရင်, ယူနိုက်တက်စတိတ်အနုညာတစီရင်
11/06/2016 အားဖြင့် IAA ကွန်ယက်
အဆိုပါခုံသမာဓိတရားရုံးများ၏တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုကိုသေချာစေရန်, ဒိုင်လူကြီး၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးတာဝန် "misjudged" အတွက်ကျူးလွန်ခံရနိုင်ဘူး, ကြောင်း "ဟုအဆိုပါစွပ်စွဲလက်မခံနိုင်သောအပြုအမူတရားစီရင်ရေးလုပ်ရပ်များ၏ content တိုက်ရိုက်ပြောပြတယ်" ဟုပြောရန်ဖြစ်ပါသည် ပထမဦးဆုံးမှတ်တိုင်များအတွင်းရှိ, ပြင်သစ်တရားရုံးပင်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတို့၏အလင်းနှင့်သတိမဲ့ကဲ့ရဲ့ပြစ်တင်ခြင်းကိုနှင့်အတူဒိုင်လူကြီးများ၏တာဝန်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့လိုသူလျှောက်ထားမှုအတွက်အပြစ်ပေးပါပြီ. […]
အောက်မှာ Filed: Aceris ဥပဒေ SARL, အနုညာတစီရင်လုပ်ထုံးလုပ်နည်း, ခုံသမဓိ, ပြင်သစ်အနုညာတစီရင်, အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအနုညာတစီရင်ဥပဒေ, အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအနုညာတစီရင်ဥပဒေခိုင်မြဲသော, ပဲရစ်အနုညာတစီရင်
အဆိုပါတစ်ခုအောက်တွင်ခုံသမာဓိနှောင်းပိုင်း Nomination ၏ဖြစ်ရပ်မှန် 2012 ICC ကစည်းကမ်းများ
06/06/2016 အားဖြင့် IAA ကွန်ယက်
တစ်ခုံသမာဓိရုံးနှောင်းပိုင်းကအမည်စာရင်းတင်သွင်း၏ဖြစ်ရပ်အတွက် ICC ကစည်းကမ်းများအောက်တွင်တစ်ဦးပုံမှန်မဟုတ်သောတစ်ခုဖြစ်ပါသည်. အပိုဒ်လက်အောက်တွင် 12(4) ၏ 2012 ICC ကစည်းကမ်းများ, အဆိုပါပါတီများသုံးအဖွဲ့ဝင်ခုံရုံးအပျေါမှာသဘောတူညီခဲ့သောဖြစ်ရပ်အတွက်, အဆိုပါတောင်းဆိုမှုအတွက်၎င်း၏ Co-ခုံသမာဓိရုံး၏အမည်စာရင်းတင်သွင်းအတူတောင်းဆိုသူရရှိသော, နှင့်တုံ့ပြန်သည့်အတွက်၎င်း၏ Co-ခုံသမာဓိရုံးအဆိုပြုတင်သွင်း […]
အောက်မှာ Filed: Aceris ဥပဒေ SARL, အနုညာတစီရင်သဘောတူညီချက်, အနုညာတစီရင်ဆုချီးမြှင့်, အနုညာတစီရင်စီရင်ပိုင်ခွင့်, ခုံသမဓိ, အနုညာတစီရင်ဆုကို၏ဘက်တော်သား, ICC ကအနုညာတစီရင်, ခွင့်အာဏာ, နယူးယောက်ကွန်ဗင်းရှင်း